Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguAugusta
I-La Casetta del Gelso ikwi-hamlet encinci, esandula ukulungiswa, enezindlu zamatye kunye nomthi we-mulberry wekhulu, kwaye yindawo efanelekileyo yokutyelela izixeko ezikufutshane zobugcisa kunye nokuhamba ngeendlela ngeenyawo kunye nangebhayisikili yeentaba.
Indlu ifumaneka eClastra kwindlwana encinci kwi-384 m. phezu komphakamo wolwandle, kwindawo entle yeentlambo zaseNatisone, iikhilomitha ezili-10. ukusuka kwidolophu yembali yaseCividale del Friuli, indawo yelifa le-UNESCO, kunye ne-20 km. ukusuka eUdine.
La Casetta del Gelso yakhiwe kwimigangatho emi-3.
Umgangatho ophantsi: igumbi lokuhlala, ikhitshi elinendawo evulekileyo kunye nendlu yangasese eyahlukileyo.
Umgangatho wokuqala: amagumbi amabini okulala, enye iphindwe kabini kwaye enye ineebhedi ezi-3 ezingatshatanga kunye negumbi lokuhlambela elineshawa.
Isiseko: Ithaveni kunye nekona yokufunda epholileyo enendawo yomlilo evulekileyo nesebenzayo.
Ibhedi kunye nesitulo esiphezulu ziyafumaneka xa uceliwe.
ILa casa del Gelso ikwilali encinci echulumancisayo apho uya kufumana inzolo kunye noxolo kwindalo emangalisayo engonakaliswanga.
kodwa ukulungele ukunika ulwazi kunye noncedo i
Umbuki zindwendwe ngu- Augusta
Ekufikeni kwakho, nokuba andiyi kubakho, uya kufumana u-Adriana, umncedisi womninimzi, ohlala kumgama weemitha ezimbalwa. Uya kukunika izitshixo zendlu, akunike lonke ulwazi oluyimfuneko kwaye uya kuba nakho kuyo nayiphi na into eyenzekayo.
Endlwini uya kufumana iincwadana ezahlukeneyo zokukwazi ukucwangcisa uhambo lwakho.
Ekufikeni kwakho, nokuba andiyi kubakho, uya kufumana u-Adriana, umncedisi womninimzi, ohlala kumgama weemitha ezimbalwa. Uya kukunika izitshixo zendlu, akunike lonke ulwazi oluyim…